- नेपाली सन्देश आइतवार, साउन २०, २०७५ , 6.5K जनाले हेर्नुभयो
२० साउन, काठमाडौं । एक साताभित्र भारतको नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरिएका नेपाली चेलीहरुको संख्या ७१ पुगिसकेको छ । दिल्लीको मुनिरका र मैदानगढीबाट १६/१६ र पहाडगंजबाट ३९ जनाको उद्धार गरिएको त्यहाँको महिला आयोगले जनाएको छ ।
अझै १२ हजार नेपाली महिला भारतमै !
उनलाई तीन हप्ता दिल्ली पुर्‍याएर मुनिरकामा राखिएको थियो । आफूलाई राखिएको ठाउँ वरपर विदेश पठाउन लागिएका नेपाली महिला छ्याप-छ्याप्ती भेटिने गरेको उनले बताइन् । एक निजी घरको साँघुरो कोठाबाट उद्धार गरिएकी सकलाले भनिन्, ‘प्रहरीले थाहा पाएर पो हामीलाई उद्धार गर्‍यो, नत्र त्यस वरीपरी हामी जस्तै विदेश जान बसेका नेपाली दिदीबहिनीहरू कति छन् कति !’
सकलाले भने जस्तै खाडी जान भनेर भारतमा पुगेका महिलाको संख्या कति होला त ? विदेशमा अलपत्र महिलाको उद्धारमा संलग्न एक गैरसरकारी संस्था (गैसस)का अनुसार मानव तस्करहरुले खाडी पुर्‍याउने प्रलोभनमा पारेर १२ हजार भन्दा बढी नेपाली महिलालाई भारतमा लगेर राखेको छ ।
तर, दुबई आएको केही हप्तामै प्रितिको गालामा रातो-रातो दाग देखिन थाल्यो । घर मालिक-मालिक्नीले उनको उपचार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै कचकच गर्न थाले । ‘सीधै घर जा त भनेका थिएनन् तर, सानोसानो कुरामा निहुँ झिकेर कचकच गर्न थालेपछि त्यहाँ बस्न मन लागेन’, प्रिति भन्छिन् ।
कामदारको रुपमा गएको अभिलेख नरहने हुँदा कतै उजुरवाजुर गर्न पनि पाइँदैन । आफू गएको देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा अभिलेख नहुने हुँदा आपतविपत परेका बेला आधिकारीक रुपमा दूतावास गुहार्न पनि पाउँदैनन् । स्पोन्सर (काम दिने व्यक्ति) कोहो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अभिलेखै नभएपछि कानुनी रुपमा पाउनै पर्ने बाँकी जानकारी पनि पाउने प्रश्न भएन ।
घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जान शुल्क लाग्दैन । किनभने सम्पूर्ण खर्च स्पोन्सर (काम दिने व्यक्ति) ले नै व्यहोर्नु पर्छ । एक जना कामदार ल्याउनका लागि सात लाख रुपियाँसम्म खर्च भएको स्पोन्सरहरुले बताउने गरेका छन् ।
पढ्नुहोस् यो समाचार- दिल्लीबाट फर्काइएका चेली भन्छन्- विदेश जान पाऔं !
नक्कली कागजपत्र बन्ने भएपछि तोकिएको भन्दा कम उमेरका पनि खाडी पुगिरहेका छन् । घरेलु कामदारमा जाने उमेर २५ वर्ष तोकिएको भएपनि १७-१८ वर्षकै उमेर युवती विदेशिने गरेका छन् । यसरी जानेहरूले उमेर बढाए बापत प्रतिवर्षको पाँच हजारका दरले रक बुझाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जस्तो १८ वर्षलाई २६ बनाउँदा कागजपत्र मिलाउने दलालले ४० हजार लिनेगर्छ ।
को जान्छन् घरेलु कामदारमा ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १८९ मा घरेलु कामदारलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रम ऐनहरूले पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन/राख्ने पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर अधिकांश कामदारलाई कुन देश जाँदैछु र मासिक पारिश्रमिक कति छ ? भन्ने बाहेक केही थाहा हुँदैन ।
९० प्रतिशत भन्दा बढी घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जानेहरू अति गरिबीको रेखामुनि र निरक्षर पाइएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारको पाटोमध्ये घरेलु कामदारको विषय सबैभन्दा संवेदनशील छ ।’
तर सरकार, कामदार स्वय र अन्य सरोकारवाला निकायले भने यो संवेदनशीलतालाई मनन गर्न नसकेको डा. गुरुङको बुझाइ छ । नेपाल, श्रीलंका, भारत जस्ता देशबाट बच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, विरामीको हेरचाह गर्न घरेलु कामदारको माग ठूलो छ । तर, नेपालले उपयुक्त मापदण्ड बनाएर कामदार पठाउन सकेको छैन ।
प्रतिवन्धले कसलाई के घाटा ?
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङ प्रतिवन्धभन्दा नियमन र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । भाषा, सीप सिकाउने, अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्रै पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सकिन्छ भने ‘सेल्फ डिफेन्स’का लागि मार्सल आर्ट जस्ता अत्मसुरक्षाका कोर्सहरु पनि समेट्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।
तर, श्रम सम्झौता गरेर वैधानिक बाटो पनि खुला नगर्ने र अवैधानिक बाटोबाट जानेहरुलाई रोक्न पनि नसक्ने हो भने ठूलो दुर्घटना पर्खिएर बस्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सरकार कहिले दुर्घटना होला र समाधान गरौंला भनेर बस्ने होइन । अहिल्यै उपचार खोजिएन भने ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।’